ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်း ပြည်မြို့တွင် ရောက်ရှိ နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တွဲလက်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ် ပြည်ကြီးတံခွန်(၄) ရေယာဉ်ပေါ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု့အားပေး။ | Inland Water Transport
Future of IWT
Services of IWT
Schedules for Route
Myitwa (Delta) Division
Cargo Transport Department
Dagon Seikkan Dockyard
Home » ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်း ပြည်မြို့တွင် ရောက်ရှိ နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တွဲလက်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ် ပြည်ကြီးတံခွန်(၄) ရေယာဉ်ပေါ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု့အားပေး။
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်း ပြည်မြို့တွင် ရောက်ရှိ နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တွဲလက်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ် ပြည်ကြီးတံခွန်(၄) ရေယာဉ်ပေါ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု့အားပေး။
Submitted by Irrawaddy_pannel on Wed, 12/12/2018 - 11:45
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်း သည် ဒုတိယ အထွေထွေမန်နေဂျာ (ပို့ဆောင်ရေး) ဦးဝင်းကိုအောင်၊ လ/ထအထွေထွေမန်နေဂျာ(မြစ်ဝ) ဦးသိန်းမြင့် နှင့် မန်နေဂျာ ဦးစိုးမြင့်ဆွေ တို့လိုက်ပါလျှက် ရန်ကုန်မြို့မှ ပြည်မြို့သို့ (၃၀.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့ (ဝ၄:၅၅) နာရီအချိန်တွင် ထွက်ခွာခဲ့ရာ (၁၁:၃၀) နာရီအချိန်တွင် ပြည်မြို့သို့ရောက်ရှိပြီး၊ ပြည်မြို့သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းတွင် ဆိုက်ကပ် ထားသည့် ပြည်ကြီးတံခွန် (၄) ရေယာဉ်ပေါ်သို့တက်ရောက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက်များ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Rev.ဦးသိန်းလွင် နှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို တွေဆုံ အားပေးပါသည်။
ထို့နောက် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးသည် ရေယာဉ်ပေါ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပနေမှုအခြေအနေကို ကြည့်ရှု့ပြီးနောက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမန်နေဂျာရုံး တာဝန်ခံနှင့် ဒေသခံဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်(၄) ရေယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက် ရှိကြသည့် ကြီးကြပ်သူ အရာထမ်းများ၊ ရေယာဉ်ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးအတွက် အထူးအလေးထား ဂရုတစိုက် ခုတ်မောင်း သွားလာရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တွဲလက်များအဖွဲ့အတွက် လိုအပ်သည်များကို စေတနာထား ဆောင်ရွက်ပေးရေး တို့ကို လမ်းညွှန် မှာကြားပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်ကို ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ဧရာဝတီဌာနခွဲမှ "ပြည်ကြီးတံခွန်(၄)" ရေယာဉ်ဖြင့် မန္တလေးမြို့မှ ရန်ကုန်မြို့အထိ (၁၅.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၁၁.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့ထိ ရက်ပေါင်း (၂၇)ရက်ကြာ ဧရာဝတီမြစ် ကြောင်းတစ်လျှောက် စုန်ဆင်း၍ ဆိပ်ကမ်းကြီးများတွင် ဆိုက်ကပ်ရပ်နားကာ ဆိုက်ကပ်ရာ ဆိပ်ကမ်းမြို့ကြီးများနှင့် အနီးအနားရှိ မြို့/ရွာများသို့ သွားရောက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေး အထိမ်းအမှတ် ပိုစတာစိုက်ထူပွဲ အခမ်းအနားများ ကျင်းပခြင်း၊ ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ် ကောက်ခံပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲများ ပြုလုပ် လျှက်ရှိပါသည်။
"ပြည်ကြီးတံခွန်(၄)" ရေယာဉ်သည် (၁၆.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့၊ နံနက် (ဝ၈:၂၀) နာရီအချိန်တွင် မန္တလေးမြို့မှ စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး လမ်းခရီးတစ်လျှောက်ရှိ စစ်ကိုင်းမြို့၊ မြင်းမူမြို့၊ ဆီမီးခုံမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့၊ ညောင်ဦးမြို့၊ ချောက်မြို့၊ စလေမြို့၊ ရေနံချောင်းမြို့၊ မကွေးမြို့၊ နတ်မောက်မြို့၊ မင်းလှမြို့၊ မီးချောင်းရဲမြို့နှင့် သရက်မြို့ တို့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ပြည်မြို့ဆိပ်ကမ်းသို့ (၃၀.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့ (ဝ၉:၄၀) နာရီအချိန်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ (၃၀.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့နှင့် (၁.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တို့တွင် ပြည်မြို့တွင် ရပ်နား၍ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ (၂.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မြန်အောင်မြို့၊ (၃.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ရွှေကျင်မြို့၊ (၄.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ပျဉ်းကတိုးကျွန်း၊ (၅.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ဟင်္သာတမြို့၊ (၆.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ဇလွန်မြို့၊ (၇.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ဓနုဖြူမြို့၊ (၈.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ညောင်တုန်းမြို့၊ (၉.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် မအူပင်မြို့၊ (၁၀.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် တွံတေးမြို့နှင့် (၁၁.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိကာ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Last Updated on Wed, 12/12/2018 - 11:45
Copyright © 2015 Inland Water Transport, Myanmar. All rights reserved. Powered By : Information Matrix